Hot News-10 Jan 2011 - video.phpmyanmar.com
End of Article - Hot News-10 Jan 2011
heroine.tvxq May 16, 2011 - 3:16 am
Hero ရေ Fighting.........!
သန်းဇော်ထွေး February 7, 2011 - 8:42 am
ဒီမှာ ပိုစ် အသစ်တင်တိုင်း မေး ထဲ ရောက်ချင်ပါ တယ် ဘယ် လိုလုပ်ရမလဲ ပြေပြ ပေး ပါ ခင်မျာ thanzawhtwe1990@
juni January 17, 2011 - 10:10 pm
We want to makeagroup as like as TVXQ .We need2boys between 17 to 21 age.If u interest please connect me. donbangshiki@gmail.com
kc2g(JY) January 14, 2011 - 11:26 am
Hi!I'mamember of kc2g who love jyj and EX_tvxq crazily!!!!!! Kc2g means Korea crazy girl.We love tvxq and jyj's songs.We want to be singer group like tvxq!!!!!
juni January 10, 2011 - 9:45 pm
အဆိုဝါသနာရှင်2ဦး အ လိုရှိသည် ။ မိမိကိုယ်မိမိယုံကြည် ချက်ရှိပါ ကဆက်သွယ်ပါ ။ အသက် 17 မှ 21 ကြား ။ မှ တ်ချက် ... boys များ သာ . ကိုး ရီး ယား သီချင်း များ အ ကြောင်း သိရမည် .ရုပ်ရည် အသင့် အတင့်ရှိရမည် . street dance အ ခြေခံရှိရမည် ။ ။ ။ donbangshiki@gmail.com
Rendering time 0.0304 sec